DriveTribe, pasocial network yevanoda mota | IPhone nhau
Pamwe zuva rega rega mamwe masocial network anozvarwa munyika, asi chokwadi ndechekuti ruzhinji runowira mukukanganwa mushure memwedzi mishoma, mune yakanakisa kesi. NaDriveTribe ndanga ndichida kuve nemoyo murefu uye ndokupa iyo mwedzi mishoma ndisati ndakuudza nezvazvo, asi ikozvino ndinofunga inguva yekuunza izvi pamberi. yakakwana pasocial network kune avo vedu vane shungu nezve mota yenyika, uye kunyanya nezvemota. Ehe, uye ini ndagara ndakuyambira, chose muchirungu
2 Iyo app
Mazuva ano zviri nyore kuwana purojekiti kumberi kana uine rutsigiro rwakakwana rweveruzhinji, uye nyaya yeDriveTribe inonyanya kuratidza muenzaniso weizvi. Mureza ne mota mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose (Jeremy Clarkson) uye achitsigirwa neshamwari dzake mbiri dzakatendeka (James May naRichard Hammond), DriveTribe yaive nechishuwo chakakodzera chekupinda zvakadzika munharaunda isingazeze kuenda kwaJezza, ichiva humbowo hwakanaka ichi chiitiko chinonakidza cheThe Grand Tour uye kutadza kwakaringana kweTop Gear nyowani.
Asi chii chinonzi heck Drive? Ivo vanoitsanangura se "pasocial network yevanoda kumhanyisa mota", uye ichiri tsananguro kwayo, asi zvakakodzera kuti tiende kumberi zvishoma. Iyo inoumbwa neakasiyana 'madzinza' atinogona kunyorera uye mune atinogona kushambadzira, nguva dzose zvinoenderana nezvatinofarira. Kune mota dzekare, supercars kana migwagwa inoshamisa, yekupa mienzaniso mitatu yakapusa.
Nhasi haugone kubudirira pasina chikumbiro chakakodzera, uye tinogona kutaura izvozvo DriveTribe anayo. Iine dhizaini iyo nhema nechena zvinotungamira, iyo app inoshanda nekukasira kumhanya uye inofambisa manejimendi enetiweki yekutandarira kunyangwe kupfuura webhusaiti pachayo pakombuta
Ini ndinonyanya kufarira zvikamu zve pasi menyu, sezvo vachitibvumira kuti tione chaizvo zvatinoda. Iyo inotipa isu yekuverenga-chete chikamu, vhidhiyo chikamu, manejimendi e'madzinza 'uye chinyorwa cheyevero dzakagamuchirwa. Iyo inokurumidza system kupfuura mune mamwe maratidziro uye inochengetedza nguva yekutsvaga izvo zvemukati zvatinoda kushandisa. Ehezve, isu tinogona kugovera kumadzinza nezviri mukati medu, sezvo iri pfungwa yepamoyo pasocial network.
Zviripachena saka kuti isu takatarisana nenzvimbo chaiyo uye isina nzvimbo yevanhu vasingade injini, asi iyo 'peturu yemusoro' ikozvino yave nenzvimbo yekuve ruzivo uye kuvaraidzwa, apo uchidzidziswa neanodiwa uye anovengwa Jeremy Clarkson. Uye nenzira, iwe unogona kunatsiridza yako Chirungu, handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » DriveTribe, pasocial network yevanoda mota
IOS 11 Inoenderana Midziyo